Ngwaahịa Ọrịa Malta Nọgidere Na-amụba
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Malta » Ngwaahịa Ọrịa Malta Nọgidere Na-amụba
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • News • Iwughachi • Resorts • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
A nabatala Malta, agwaetiti nke dị n'etiti Oke Osimiri Mediterenian maka ọmarịcha ebe obibi ya, ihu igwe ya na-ekpo ọkụ, yana akụkọ puku afọ asaa. Ndị ọbịa nwere ike ịnụ ụtọ ụlọ oriri na ọ hotelsụ newụ ndị ọhụrụ dị n'akụkụ agwaetiti ahụ, gụnyere Valletta, isi obodo Malta, nke bụ saịtị UNESCO World Heritage.
Ọhụrụ okomoko oghere a na-agụnye a maara nke ọma mba okomoko ika a nta akụkọ ihe mere eme boutique ahụmahụ. Uzo abuo ise nwere ulo oru ohuru ohuru, weputa echiche nke Spa na Wellness na ọkwa ohuru.
“Malta mara mma karịsịa n'ebe ndị njem okomoko ahụ nọ,” ka Michelle Buttigieg, Onye Nnọchiteanya Njem Nleta Njem Nleta nke Malta na North America kwuru, “n'ihi na ọnụ ọgụgụ mmadụ pere mpe karịa mba Europe,
Asụsụ Bekee, na-arịọ arịrịọ dị iche iche maka ọdịmma na afọ, yana nke kachasị, na-enye ọtụtụ ohere maka ahụmịhe na-emezighị emezi na ịgwọta, na-eme ka usoro ọgwụgwọ ahụike dị mma. ”
Hyatt Regency Malta dị na obodo ndị a ma ama n'akụkụ mmiri nke St Julian's, bụ ezigbo Pied-à-Terre. Ndị ọbịa ụlọ oriri na ọ Hotelụ Hotelụ nwere ike ịnụ ụtọ ọtụtụ ọrụ na ihe eji enyere ndụ aka, gụnyere ọmarịcha ahụkarị nri na ụlọ nri atọ, ọgwụgwọ spa, yana ebe ọrụ na-agbanwe agbanwe. Yatlọ ọrụ Hyatt Regency a ma ama nke ụwa mbụ na Malta gụnyere ime ụlọ 151, 11 Regency Suites, na 1 Ambassador Suite, na-egosipụta ma echiche nke Oké Osimiri Mediterenian ma ọ bụ echiche obodo ndị mara mma.
Lọ ọdụ ụgbọ mmiri Iniala
&Lọ & Ebe Obibi Iniala
Na-elele Nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri Malta ma ama ama ama ama ama ama na St. Barbara Bastion a ma ama, akụ a bara ụba gụnyere ọtụtụ ụlọ obodo Maltese dị iche iche na ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri oge ochie, nke ejiri ịhụnanya weghachite na izu oke. Na-egosi arịa eji eme ọmarịcha, akwa mara mma, na mbara ihu Maltị mara mma, ime ụlọ ndị mara mma na nnukwu ụlọ ndị nwere ọdọ mmiri, na-eme ememme ọgbara ọhụrụ nke na-egosi n'ụzọ doro anya ihe nketa na amara Valletta. N’ebe a n’elu ụlọ mara mma, ụlọ oriri na ọ restaurantụerụ nke mbụ nke ụlọ nkwari akụ ahụ, ION - The Harbor, na-enye echiche dị egwu yana nri pụrụ iche, nke mkpụrụ osisi a ma ama sitere n’aka Andrew Borg.
Na Iniala Spa edoziri imeghe na Machị 2021. N’ebe anwansi di na otu n’ime ihe nlere akuku akuko Iniala, ebe spa nwere okpukpu abuo na otu ulo ogwu, ulo uzuoku, sauna, ebe izu ike, na ebe a na - egwu oku. Ndị na-agwọ ọrịa Iniala nwere oke mmụta na-enye usoro ọgwụgwọ ahụike dị mma site na iji ụdị ụlọ ọrụ na ngwaahịa ndị na-eduga, ma ọ bụ na spa ma ọ bụ na nkasi obi nke ụlọ nkeonwe. Ọgwụ na mmemme nwere ike ịhazi ma gụnye ọgwụgwọ zuru oke n'akụkụ niile nke ụwa.
Ihe Njirimara Ise nke Reimagining Spas Spas dika Osisi nke Wellness
Athenaeum Spa na Ise-Star Corinthia Obí
Emeghere ya dị ka ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ma gbanwee ghọọ ụlọ nkwari akụ guzobere Corinthia na 1968, Corinthia Palace na Attard abụrụla akụkụ akụkọ ama ama nke Malta - lee ma hụ ebe a na-aga. Site na ngbanwegharị otu afọ, e meghere Athenaeum Spa ọhụrụ dị ka oghere ụkwụ dị jụụ nke ụkwụ 2,000 n'ime ogige ndị jupụtara na Mediterenian. Athenaeum Spa ahụ emere ka ndị ọbịa nweta ụlọ ọrụ pụrụ iche gụnyere akwa Vitality Suite na ọdọ mmiri, sauna na ime ụlọ uzuoku, ime ụlọ ntu, ụlọ ọgwụgwọ asaa mara mma, ebe ezumike na teres, na ọdọ mmiri ime ụlọ nwere jacuzzi na nnukwu n'èzí ọdọ mmiri Na mmekorita ya na ESPA, Athenaeum na-enye ngwaahịa na ọgwụgwọ okomoko nke na-eme ọtụtụ ihe ndị sitere n'okike na ọdịnala ọgwụgwọ Malta. Ọ bụ ezie na Athenaeum Spa na-esonye na pọtụfoliyo nke amaala ESPA ndị ọzọ ama ama gburugburu ụwa emebere ya site na iji ọdịbendị bara ụba na ihe nketa nke Malta n'uche. Ahụmịhe na-enweghị ntụpọ nke ime ụlọ-n'èzí na-eme ndị omenkà mpaghara na gburugburu ebe obibi dị jụụ dị na Mediterenian, na -emepụta ebe dị mma iji gbanahụ nchegbu nke ụwa, ma n'ahụ ma n'uche.
Ma ma mma ma okomoko ezumike, Phenicia dị na mpụga isi obodo nke Valletta.
The ọhụrụ Mkpụrụ obi dị omimi na Phenicia Malta na-anabata ndị ọbịa na gburugburu nke ọkaibe na nke sitere n'okike. Ojiji nke ihe dika osisi ukpa, mabul na nkume Malta na-enye spa a ebe a ma ihe okike nke mere ka ọ bụrụ ezigbo ezumike nke Maltese. Ndị ọbịa nwere ike ịjụ oyi na igwu mmiri n'ime ọdọ mmiri, rụọ ọrụ na mpaghara ahụ dị mma yana akụrụngwa ọgbara ọhụrụ, ma ọ bụ zuru ike na mpaghara ọkaibe na-egosipụta ụlọ nnu, sauna, ụlọ steam, na mmiri ọtụtụ jet. Ahịa aka maka akwa akwa ma ọ bụ ọgwụgwọ ihu ọkachamara dịkwa.
Maka ama ndi ozo banyere ihe ohuru, gaa https://www.visitmalta.com/en/home, @visitmalta na Twitter, @VisitMalta na Facebook, na @visitmalta na Instagram.
Agwaetiti ndị anwụ na-acha na Malta, n'etiti Oké Osimiri Mediterenian, bụ ebe obibi maka ịchebe kachasị dị egwu nke ihe nketa na-emebibeghị, gụnyere nke kachasị elu nke UNESCO World Heritage Sites na mba ọ bụla-steeti ebe ọ bụla. Valletta wuru ndị Knights dị mpako nke St John bụ otu n'ime nlegharị anya UNESCO na European Capital nke Omenala maka afọ 2018. Ebumnuche Malta na okwute sitere na okwute ụlọ kacha ochie na-akwụghị ụgwọ ọ bụla na ụwa, ruo na otu nke Alaeze Ukwu Britain kachasị egwu. usoro nchebe, ma gunyere ngwakọta nke ụlọ, okpukpe na usoro ndị agha site n'oge ochie, ochie, na oge oge a. Site na ihu igwe na-achasi ike, osimiri mara mma, ndụ abalị na-eme nke ọma, na afọ 7,000 nke akụkọ na-akpali mmasị, enwere nnukwu ọrụ ịhụ na ime. Maka ozi ndị ọzọ na Malta, gaa na www.visitmalta.com.